Ngabe ufuna ukuya travel kule entwasahlobo? - Jomo Technology Co., Ltd
Spring uyeza maduze, ongathanda uhambo ngasiphi isikhathi? Noma ufuna ukuphuma futhi uhlole imihlaba ehlukene? Ingabe ufuna ukunikeza wena noma umkhaya iholidi umxhwele futhi ephelele?
Uma impendulo inguYebo, sicela ukhethe libalele ukuphuma, khona-ke kuyobonakala ngelinye kwenkundla ezingalindelekile ekupheleni uhambo lwakho.
Nokho, kukhona umbuzo, okuyinto izinto zokuhamba ingabe uncamela ukukhetha, indiza noma ukuqeqesha? Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha, uma kufika endaweni ekupheleni uhambo, udinga i esihle iDemo-ibanga ezokuthutha. Kodwa lapho iDemo-ibanga travel thuluzi okungcono?
Namuhla, skateboard Electric athandwa kakhulu amantombazane kakhulu abasha abafana. Akukhona nje kuphela ithuluzi elihle uhambo lokuya emsebenzini kodwa futhi ngempela kungaba ukuheha amehlo abantu. China Koowheel 2 isizukulwane longboard kagesi (brushless Dual ihabhu-motors) has battery pack replaceable, 2pcs ibhethri amaphakethe ingahlala 60km, hamba eside. Isivinini salo esivamile kuyinto 30KM / h, ijubane phezulu 42km / h, hamba ngokushesha. (kuye ngokuthi isisindo umzimba kanye isimo road) Ngaphandle kwalokho, lokhu kuyinto skateboard kagesi egunyazelwe ukwenza Air travel, asikho isidingo sokuthi bakhathazeke ngenkinga boarding nhlobo.
Uma intombazane fashion noma umfana, ukuletha skateboard kagesi kuyinto okukhethayo best. Ungaqala ukuhlola kuleli zwe nganoma isiphi isikhathi futhi ujabulele indawo enhle endleleni. Ufisa wena ube uhambo emnandi futhi ehlukile kulesi entwasahlobo.